AbaThengi abaPhezulu abaThengiweyo abaPhezulu abaPhezulu abaPhezulu beeNtengiso zePillow | Rayson
Umenzi weRayson Spring Mattress umisele kwaye waphucula inkqubo yoqinisekiso lomgangatho ebeka izalathi zentsebenzo yemveliso kwindawo ephambili kushishino.
Abathengi abafuna ukwazi ngakumbi ngemveliso yethu entsha okanye inkampani yethu, qhagamshelana nathi nje. Kuyo yonke le nkqubo, iingcali zethu ze-QC ziya kubeka esweni inkqubo nganye yokuqinisekisa umgangatho wemveliso. Ukuza kuthi ga ngoku, uRayson upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe Zonke iimveliso kubandakanya imveliso yethu entsha zinikezelwa kuyilo olutsha, umgangatho oqinisekisiweyo, kunye namaxabiso okhuphiswano.
Ngaba ungandinceda ndenze uyilo lwethu okanye usebenzise ilogo yam kwimveliso? Sinako ukwenza umatrasi ngokokuyila kwakho okanye ukubonelela ngenkonzo ye-OEM sifuna nje ukuba usinike imveliso yakho yobugcisa okanye iifoto zelogo. 1. Beka ibhokisi kwindawo ethe tyaba kwigumbi lakho lokulala, tsala ngononophelo umatrasi uze ubeke ebhedini yakho. 2.Sika isikhwama sangaphandle ngononophelo ngesikere uqiniseke ukuba awusiki iplastiki embi ngaphakathi okanye umatrasi, musa ukumangalela imela 3.Qengqa umatrasi otywiniweyo, 4.Yisika ngononophelo ingxowa yeplastiki ecaleni kwewotshi njengoko umatrasi uqala ukubola, Susa ingxowa yeplastiki 5.Vumela iiyure ezingama-24 ukuba umandlalo wakho omtsha wandiswe ngokupheleleyo.Ndinokundwendwela umzi-mveliso wakho? Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, sikufuphi nesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun, kungathatha iyure enye ngemoto, kwaye sinokucwangcisa imoto ukukusa.
Indawo entle yokulala kubusuku obuthambileyo